Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguHoliday Rental Specialists
Indawo entle ehlaziyiweyo ye-pet-friendly kwisetingi ethandekayo yegadi
Wonke umsebenzi wenziwe kule ndlu intle yaseBowral ukuyenza ibe likhaya lakho kude nekhaya ngelixa ikwi-Southern Highlands.
Uhlaziyo lwakutsha nje olunefenitshala yangoku luyiguqule le ndlu yangasese yaba yindawo entle yokuphumla ngeeholide. Kukho iisilingi ezirhangqweyo kuyo yonke indawo kunye neembono zegadi ezibalaseleyo kuzo zonke iifestile.
Indawo yokuhlala enkulu evulekileyo igcwele ukukhanya kwaye ijonge kwigadi emnandi yamaxesha onyaka: intle entlakohlaza, ichumile ehlotyeni, i-auburn hews ekwindla kunye nenkungu emangalisayo ehlala ebusika.
Indawo yomlilo yerhasi enomtsalane igcina iindwendwe zithozamisa ebusika kwaye abalandeli besilingi bayathuthuzela ehlotyeni.
Igumbi lokutyela livuleleka kwindawo egqunywe ngasemva ejonge ngasemva indawo entle yokonwabisa kwiinyanga ezishushu nge-BBQ kunye nefenitshala yangaphandle.
Ezantsi kukho irumpus enomabonakude, ibhedi yeKing kunye neebhedi ezimbini zokumkani ezingatshatanga. Eli gumbi lidibene negumbi lokuhlambela elitsha kraca.
I-Que Sera ibekwe kwindawo efanelekileyo ukuze uhambe uye kwibala legalufa le-Bowral Country Club okanye i-tiptoe ekhaya ukusuka kumnyhadala oseGibraltar Resort. Ikwaluhambo olufutshane kakhulu olungakhathaliyo ukuya eCraigieburn, kwiCentennial Vineyards kunye naseBendooley Estate.
Ikofu yakusasa kunye nevenkile yokuthenga yimizuzu nje emi-5 yokuqhuba kwiZiko leDolophu yaseBowrals okanye ungabhukisha kwisidlo sakusasa esiphekwe ngokupheleleyo njengondwendwe losuku ePeppers Craigieburn ekoneni.
• Ukulungele izilwanyana
• Amagumbi okuhlambela ayi-3 (akukho bhafu)
• Umgangatho ongaphambili nangasemva, one-BBQ kunye nefenitshala yangaphandle
• IiTV ezi-2, iDVD, iStereo
• Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle elinoMatshini weKofu, Umatshini wokuhlamba izitya kunye neMicrowave
• Indawo yokuhlamba ixhotyiswe ngeWasha kunye nesomisi
Emva kwendlu kukho umnatha wokuziqhelanisa neqakamba kunye nenethi yebhola ekhatywayo ukuze abantwana bayonwabele
• Isitiya esihle sexesha lonyaka ebiyelwe ngokugqibeleleyo, silungele ubukhulu becala izinja ezinkulu njengoko ucingo lokubiya lulukhulu
• USihlalo oPhezulu
**Ulungelelwaniso lwegumbi lokulala:**
• Igumbi lokulala elikhulu: ukumkani, igumbi lokuhlambela
• Igumbi lokulala 2: ukumkanikazi
• Igumbi lokulala 3: ukumkanikazi
• I-Rumpus ephantsi: i-king bed kunye ne-2 x king singles
• 250 m ukuya eGibraltar Resort
• 650 m ukuya kwiKhosi yeGalufa yaseBowral Country Club
• 2 km ukuya ePeppers Craigieburn
• 2 km Hopewood
• 2 km ukuya kwiCentennial Diviyards
• Iikhilomitha ezi-3 ukuya kwiivenkile zeBowral kunye neekhefi
• Iikhilomitha ezisi-7 ukuya eBendooley Estate
• 10 km ukuya eBerrima
Zonke ilinen (amashiti kunye neetawuli zokuhlambela) zibonelelwa ngokuhlala kwakho. Ukuthuthuzela iindwendwe zethu zonke iibhedi zineekhusi ezinamakhava agcweleyo, asinawo amaphepha amathathu.
**Amanqaku athile ePropati:**
Izilwanyana zasekhaya zamkelekile kule ndawo. Kukho intlawulo eyongezelelweyo ye-100 yeedola ukuze ube nesilo-qabane sakho sihlale. Nceda ubhengeze ngexesha lokubhukisha kwaye ubhekisele kwimigaqo nemiqathango malunga nezilwanyana zasekhaya.
I-Wi-fi inikezelwa njengenkxaso eyongezelelweyo. Njengoko kungekho miba yentlawulo iya kujongwana ne-ASAP kodwa ayinakuqinisekiswa.
Ukuqinisekisa ukukhululeka kweendwendwe zethu kunye nabamelwane, asikwamkeli ukubhukisha "Izikolo" zekhefu/ngamaqela angaphantsi kwama-21yrs kwaye akukho phantsi kwazo naziphi na iimeko esivumela imitshato okanye amatheko alo naluphi na uhlobo.
Intlawulo yezigunyaziso zokubhukisha wena kunye nazo zonke iindwendwe ezihlalayo ziya kuthobela iNdlela yokuziPhatha yeNdawo yokuHlala eRentwayo yexesha elifutshane enokujongwa phantsi koLwazi lweeNdwendwe ithebhu kwiwebhusayithi yethu okanye ikhonkco eliza kuthunyelwa kuwe kwi-imeyile yokuqinisekisa ukubhukisha.
Le propati irentwa ngeeholide, ayisiyondawo ephambili yokuhlala kwaye akukho magumbi ekwabelwana ngawo. Lonwabela ixesha lakho ekuthuthuzelekeni nasekuzimeleni.
Imigaqo nemiqathango iyasebenza kule propati kwaye intlawulo iqinisekisa isivumelwano sakho kunye neso sazo zonke ezinye iindwendwe ezihlala kwindawo kunye nawe.
Imida yeendwendwe iyasebenza ngawo onke amaxesha ngexesha lokubhukisha. Naziphi na iindwendwe ezongezelelweyo (oku kubandakanya abatyeleli beentsuku) ngaphezu kwezo zibhukishweyo zaza zahlawulwa mazivunywe ngokubhaliweyo phambi kokuhlala. Kuphela ziindwendwe ezihlala kule ndawo ezivumelekileyo ukuba zibekho. Ukuba unqwenela ukuba neendwendwe ukongeza kwiindwendwe ezibhukisiweyo, kufuneka usicebise ngokubhala ngaphambi kokuhlala kwakho kwaye uqinisekise ukuba ufumana imvume ebhaliweyo. Oku akunakwenzeka kuzo zonke iipropati.
Ukuba wena okanye naluphi na olunye undwendwe lufumana isilumkiso malunga nengxolo egqithisileyo okanye iindwendwe ezigqithileyo, unokucelwa ukuba ushiye indlu NGOKUNGOKO ungabuyiswanga mali. Ingxolo evakalayo ngaphandle kwepropathi ayivumelekanga phakathi kwentsimbi ye-10:00 PM kunye ne-8:00 AM.
Lo mhlaba uvunyiwe ukuba ube yindawo yokuhlala kuphela. Akukho matrasi, iintente, iikharavani okanye iimoto ezingaphezu kwezakhiwo ezivumelekileyo. Naphantsi kwazo naziphi na iimeko le misebenzi ilandelayo ivumelekile kuzo naziphi na iindawo zethu: izithuthuthu, iibhayisekile ezimdaka, ii-quad bikes, ukusetyenziswa kwemipu okanye imipu yomoya, iziqhushumbisi.
Ngaphandle kwexesha eliphakamileyo lokuhlala kwiveki okanye ngaphezulu kunokulungela ukufumana isaphulelo, nceda usithumelele umyalezo.
Ulwazi ngexesha lokuhlala kwakho lunokufumaneka kwiFolda yoLwazi lweeNdwendwe okanye ngokufowunela iofisi yethu 24/7.
Ngokhuseleko lwakho olongezelelweyo, le ndawo ilawulwa nguMmeli oneLayisenisi yokuthengisa izindlu. Asinakuze sicele ukuba iintlawulo zenziwe kwiakhawunti yebhanki yaphesheya kwaye imali yakho igcinwe ngokukhuselekileyo kwiakhawunti yethu yeTrasti de ube uphumile.
Ukuba besinezakhiwo ezininzi kwipotfoliyo yethu yolawulo besingazifumana ngokulula zibhukishwe. Imfuno iphezulu kwaye unikezelo alukwazi ukuqhubeka. Nceda usithumelele umyalezo okanye usitsalele umnxeba ukuba ungathanda ukwazi ngakumbi malunga neepakethe esizinikezelayo zokubhukisha kunye nolawulo lwepropathi.
4.33 · Izimvo eziyi-15
Umbuki zindwendwe ngu- Holiday Rental Specialists
Izimvo eziyi-7 160
Siyavuya ukukwamkela kwenye yeepropati zethu eziphantse zibe ngama-350 eNSW South Coast, NSW Southern Highlands and Country and QLD Sunshine Coast.
Izalathiso eziya kwipropathi kunye neenkcukacha ezingundoqo / zoFikelelo ziya kuthunyelwa nge-imeyile kwiindwendwe zethu kwiintsuku ezisi-7 ngaphambi kokufika.
Ngexesha lokuhlala kwakho ulwazi oluninzi lunokufumaneka kwiFolda yoLwazi lweeNdwendwe okanye ungafowunela iqela lethu 24/7 ku-02 48625200.
Izalathiso eziya kwipropath…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-16541
Iilwimi: English, Français, Italiano, Tagalog
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R5657
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bowral